Dad shacab ah oo lagu dilay magaalada Dhuusamareeb – Somali Top News
Dad shacab ah oo lagu dilay magaalada Dhuusamareeb
Wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee Maamulka Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay Saqdii dhexe 4 Ruux lagu dilay deegaan Duleedka ka ah Magalada Dhuusamareeb oo ah Xarunta rasmiga ah ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Deegaanka Dhiin-waris oo Dhanka Koonfur ka Xiga Magaalada Dhusamareeb lagu dilay Afarta Qof oo ka mid ahaa Shaqaalaha Goob Shinada Malabka looga dhaliyo.
Wararka qaar ayaa waxaa ay sheegayaan in Afarta qof ee la dilay ay kasoo jeedaan deegaanada Maamulka Koonfur Galbeed,isla markaana loo dilay falal la xiriira aanooyin qabiil wallow aysan jirin cid sirasmi ah warkaasi u xaqiijisay.
Majirto cid sirasmi ah u sheegatay mas’uuliyada dilka Afarta Ruux ee Shacabka ahaa loogu geystay duleedka Magalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud,waxaana dhacdadaan Maanta siweyn looga hadal hayaa Magalada Dhuusamareeb.
← Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Ergayga Gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika
Howlgallo ka dhan ah Al shabaab oo ka socda gobalka Jubbada Hoose →
Ciidamada Dowladda oo howllgalo qorsheysan ka wada gobalka Shabeelaha Hoose
Oglan Baker oo wada qorshaha wadahadalada Somalia iyo Somaliland
September 23, 2019 September 23, 2019 Somali Top News 0